Raspberry | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Any amin'ny zaridaina maro, eny fa na dia ireo mpamboly am-pitiavana be mpihinana aza, dia mahalana ny mahita kirihitr'olon-joma. Ny olona dia zatra amin'ny hoe mena ireo bao ireo, fa tsy bandy. Ny fihinanan-kena - dia havanao ny voankazo mahazatra - ala honko. Indray mandeha anefa dia nisy ny fiovaovana "domesticated", izay nahatonga ny taolam-paty mena manopy matevina.
Vitsy amintsika no nahita mena hoditra mena teo imasontsika. Saingy misy voankazo mainty. Ary koa izy io koa mavo. Ity karazana kolontsaina masomboly ity dia mahaliana toy ny solontenan'ny "tradisionnaire". Ny mainty hoditra mena dia tsy tena fantatry ny besinimaro, satria betsaka ny fifandraisana amin'ny mainty hoditra rehefa miresaka be dia be.
Ny fampiasana ronono mivolombolobe: ny toetra mahasoa sy ny fanoherana
Any amin'ny zaridaina sy ny trano fialantsasatra amin'ny lohataona dia afaka mahita trondro malefaka miaraka amin'ny voany mainty ianao indraindray. Ity raspberry ity dia antsoina hoe blackberry. Maro no mandray izany ho an'ny alikaola. Raha ny marina dia mitovy be ny endriny: mainty mainty miaraka amin'ny volon'ondry miloko volomparasy sy lelavola spiky. Ny mainty hoditra mainty hoditra, izay mampifamotika karazan-tsakafo mena sy ravinkazo mena, dia mihoatra lavitra noho ny fahatsinjarany, ny fanandramana ary, indrindra indrindra, ny mahasoa ny fahasalamana.
Ny divay makamba homemade, fomba tsara indrindra
Ny fihinanan-kena dia karazana lobaka araraka, izay matetika no nampiasaina hanamboaran-jomà, jams, "vitamins" (tsiro vaovao, sira miaraka amin'ny siramamy), compotes, siropo, na mangatsiaka tsotra fotsiny. Angamba tsy ny rehetra no mahafantatra fa tsy ny dessert mamy ihany, fa ny divay koa azo atao avy amin'ny fihinanan-kena. Ny berries dia ampiasaina hanamboatra divay mofomamy mahavelona ao an-trano, samirery.
Top 10 karazana fambolena anana ho an'ny faritra Moskoa
Ny rambon'omby - iray amin'ireo voankazo matsiro sy mamy indrindra. Na dia izany aza dia tena zava-dehibe ny fisafidianana ny karazana mety ho an'ny fambolena any amin'ny faritra iray. Manolotra anao ireo karazana tsara indrindra ho an'ny rajako afon-dasy ho an'ny tarika afovoany. Atlant Atlant dia asehon'ny karazan-tsakafo maitso, ny haavony avo indrindra dia 1.
Ny fomba hanamorana ny ravin-boninkazo sy ny fomba handoany dite
Ny menaka raspberry dia tsy lafo vidy sy mamy, fa tena ilaina koa ny vokatra azo ampiasaina amin'ny fitondrana mangatsiaka. Na izany aza, ny berry dia tsy zavatra tokana azo azo avy amin'ny kirihitr'alambo. Noho izany, androany dia hiteny aminareo izahay mikasika ny fomba fampiasana ravinkazo maitso sy ny maha-ilaina azy ireo, ary koa ny mahatakatra ny fomba handrobana azy ireo.
Ahoana no fomba hanamboarana menaka makamba ao an-trano
Ny ronono Raspberry - tena mahafinaritra ny ankizy sy ny olon-dehibe. Izy ireo dia feno ranom-boankazo, mihinana siramamy kely misy zava-pisotro mahamamo, miparitaka amin'ny mofo. Miomana amin'ny fampiasana ny hafanana ary tsy misy izany. Ny toetra sy ny zava-manan'aina rehetra mahavelona izany. Tianay ny hizara fomba fanamboarana matsiro sy tsotra ho an'ny famokarana menaka makamba.
Inona no tokony hatao amin'ny ririnina amin'ny ririnina: ny fomba hanakanana siramamy, sompitra, siropo, fomba famenoana sy moka amin'ny siramamy
Berry Raspberry maro mifandray amin'ny fahazazana. Voalaza ao amin'ny ankamaroan'ny tantara an-tsarimihetsika, hira ary episitra izany, ary avy amin'io karazam-borona io izay tsara indrindra ho an'ny fitsaboana. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fijinjana ity hoditra ity ho an'ny ririnina sy ireo karazan-tsakafo mahavelona. Ny vokatra ilaina amin'ny Raspberry raspberry dia manangon-karena ilain'ny fiterahana: salicylic sy ascorbic asidra, mineraly, famokarana tsy mihetsika ary vitaminina, taninina, pectins ary singa maro hafa.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Raspberry